စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိုရမ်မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆု?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် ကျင်းပပြီးစီးကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းသုံးခု ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်ကို မုံရွာမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်း ရေးဖိုရမ်တက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ် ၃၇ ဦးရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ စာတမ်းသုံးခုရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေး၊ သဘာဝဘေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးသူများအား ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ စာတမ်းသုံးခုရရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ဖိုရမ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးကျော်မိုးလှိုင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်က ပြောသည်။ အဆိုပါစာတမ်းသုံးခုကို နေ ပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည့်အ ကြောင်းအရာအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြည် ထောင်စုအဆင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်သို့ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် နေပြည်တော်ဖိုရမ်သို့တက်ရောက်ရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၃၇ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၃၇ ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဖိုရမ်တွင် မြေယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်နှစ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုအနက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်များ ခေါင်းစဉ်အောက်မှ စာတမ်းသုံးခုထွက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ မြေယာနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းခေါင်းစဉ်ကို ဆွေး နွေးခဲ့သော်လည်း မူကြမ်းအဖြစ်သာထားရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ(UPDJC) က ဆွေးနွေးဖို့ ချမှတ်ပေးထားတဲ့မူထဲမှာ မြေယာနဲ့ သယံဇာတအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုမပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးခြင်းသာလုပ်ပြီး ဆွေး နွေးမှု မူကြမ်းအနေနဲ့ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးကျော်မိုးလှိုင်ကဆိုသည်။
မန္တလေး မဟာအောင်မြေ ကျောက်ဝိုင်းအတွင်း ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်နီးပါး တန်ဖိုးရှိ ကျောက်ထုပ် ကောက??
အစိုးရ နည်းပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မကွေး) တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ အခမဲ့ သင်ကြားပေ??
ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်းနှင့် နှမ်းမျိုး ဈေးကြီးခြင်းများကြောင့် မကွေးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအခ?
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငါးခုမြောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပါသော ရမ်ဆာ ရေဝပ်ဒေသအဖြစ် အင်းလေးကန် သတ်မှ??
ကုန်ကျစရိတ် အဆပေါင်းများစွာ ကွာသော်လည်း လူမှုဆက်ဆံရေး ကေ့ာင်းမွန်သောကြောင့် မြန်မာများ နို